Sanbaloolshe Oo Ka baxay Si Carro Leh Shir Beelaha Hawiye Uga Socday….. | Xaqiiqonews
Sanbaloolshe Oo Ka baxay Si Carro Leh Shir Beelaha Hawiye Uga Socday…..
Taliyaha hay’adda nabad sugidda dowladda Soomaaliya ahna Xildhibaan qaran C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa ka qeyb galay kulan aan caadi aheyn oo looga hadlay maqaamka gobolka Banaadir.
Kulankan oo ahaa mid aysan goob joog ka aheyn madaxda kale ee dowladda, ayaa muhiimadiisu aheyd in la helo qof waxyaabaha kulankaas looga hadla ugudbiya madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullahi Farmaajo
Laakiin Taliyaha hay’adda nabad sugidda ayaa kulankaas si deg deg ah uga baxay kadib markii uu u arkay in kulankan uu yahay mid looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya.
Xogta ayaa intaas ku dareysa in kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen beelaha Hawiye uu Taliye Sanbaloolshe usheegay in cabashada ay qabaan uu ugudbin doono madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale, waxaa uu sheegay in kulankan ay aheyd iney goob joog ka ahaadaan Duqa Muqdisho iyo Wasiirka arimaha Amniga.
“Shirkan hadii uusan aheyn mid dowladda looga soo horjeedo waxaa ay ahaan laheyd iney joogaan Wasiirka Amniga Gudaha, Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Thaabit Cabdi Maxamed”ayuu yiri Sanbaloolshe oo kulanka isaga tagay.
Waxaa uu sidoo kale, beelaha Muqdisho usheegay in dowladda ay tahay mida go’aanka ka gaareysa arinta maqaamka gobolka Banaadir
Taliyaha NISA, ayaa qiray haddiiba dadka Muqdisho ay ku kacaan dowladda inaanay hal habeen dowladdu joogi karin caasimadda, isla markaana aanay dowlad jiri doonin haddii reer Muqdisho ka horyimaadan.
Sanbaloolshe, ayaa soo hadalqaaday in Magaalada Muqdisho ay tahay mid ka wada dhaxeysa umadda Somaliyeed oo idil, sidaasi daraadeedna uu beelaha Muqdisho ugu baaqayo in si xasilooni ku jirto, ay ku raadiyan maqaamka Gobolka Banaadir.